Inona avy ireo Nofollow, Dofollow, UGC, na rohy misy tohana?
Isan'andro ny boaty fampidirana ahy dia tototry ny orinasa SEO spamming izay mangataka ny hametraka rohy ao amin'ny atiny. Rano fangatahana tsy misy farany izany ary tena mahasosotra ahy. Toy izao no fandehan'ny mailaka…
Ry Martech Zone,
Nahamarika aho fa nanoratra an'ity lahatsoratra mahavariana ity amin'ny [teny lakile]. Nanoratra lahatsoratra amin'ny antsipiriany momba izany koa izahay. Mieritreritra aho fa hanisy fanampiny tsara ho an'ny lahatsoratranao. Azafady mba ampahafantaro ahy raha afaka manondro ny lahatsoratray misy rohy ianao.
Voalohany, manoratra ilay lahatsoratra foana izy ireo toy ny hoe manandrana manampy ahy sy manatsara ny atiny rehefa fantatro tsara izay ezahin'izy ireo atao… mametraka a Backlinks. Raha manondro ny pejinao araka ny atiny tsara ny motera fikarohana, ireo pejy ireo dia hilahatra amin'ny isan'ny tranonkala mifandraika sy avo lenta izay mampifandray azy ireo.
Inona ny rohy Nofollow? Araho ny Rohy?
A Rohy Nofollow dia ampiasaina ao anatin'ny tenifototra HTML mba hilazana ny motera fikarohana mba tsy hiraharaha ilay rohy raha ny momba ny fandefasana fahefana amin'ny alalany. Toy izao ny endriny ao amin'ny HTML manta:
Ankehitriny, rehefa mandady ny pejiko ilay mpikaroka motera fikarohana, manasokajy ny atiny ary mamaritra ireo backlinks hanomezana fahefana hiverina amin'ny loharano… tsy raharahiany ny nofollow rohy. Na izany aza, raha nifandray tamin'ny pejy itodiana tao anatin'ny atiny nosoratako aho dia tsy hanana ny toetran'ny nofollow ireo marika vatofantsika ireo. Ireo no antsoina Rohy Dofollow. Amin'ny alàlan'ny default, ny rohy rehetra dia mandalo ny fahefana laharana raha tsy hoe ampidirina ny toetra rel, ary voafaritra ny kalitaon'ny rohy.
Ny mahaliana dia matetika ny rohy nofollow dia mbola aseho ao amin'ny Google Search Console. Izao no antony:
Ka ny rohy Dofollow na aiza na aiza dia manampy ny laharako?
Rehefa hita ny fahaizana manodinkodina ny laharana amin'ny alàlan'ny fanodinana rohy, indostrialy iray tapitrisa dolara dia nanomboka alina iray hanampiana ny mpanjifa hiakatra amin'ny laharana ambony. Orinasa SEO mandeha ho azy sy tafavoaka fambolena rohy ary nanitsaka ny entona hanodinana ireo motera fikarohana. Mazava ho azy fa tsikaritr'i Google… ary nianjera daholo izy rehetra.
Google dia nanatsara ny algorithmanany hanaraha-maso ny laharan'ny tranonkala izay nanangona backlinks miaraka aminy manan-danja, domains manana fahefana. Noho izany, tsia… ny manampy rohy na aiza na aiza dia tsy hanampy anao. Ny fanangonana backlinks amin'ny tranokala misy ifandraisany sy manam-pahefana dia hanampy anao. Ny mifanohitra amin'izay indrindra, ny spamming amin'ny rohy dia mety handratra ny fahafahanao milahatra satria ny faharanitan'i Google dia afaka manavaka ny fanodikodinana sy manasazy anao amin'izany.
Zava-dehibe ve ny rohy misy ny rohy?
Rehefa mandefa lahatsoratra amiko ny olona dia matetika no ahitako azy ireo mampiasa teny lakile miharihary loatra ao anatin'ny lahatsoratr'izy ireo. Tena tsy mino aho fa ny algorithman'i Google dia tsotra tokoa, hany ka ny lahatsoratra ao anatin'ny rohinao no hany teny fanalahidy. Tsy ho gaga aho raha nandinika ny atiny manodidina ny rohy i Google. Heveriko fa tsy mila miharihary amin'ny rohy ianao. Isaky ny misy fisalasalana, dia manoro hevitra ny mpanjifako aho hanao izay tsara indrindra ho an'ny mpamaky. Izany no antony ampiasako ny bokotra rehefa tena tiako ho hitan'ny olona ary tsindrio rohy ivelany.
Ary aza adino fa ny marika vatofantsika dia samy manolotra azy roa lahatsoratra ary koa lohateny ho an'ny rohinao. Ny lohateny dia toetran'ny fidirana an-tsehatra hanampiana ireo mpamaky lamba hanoritsoritra ny rohy amin'ireo mpampiasa azy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny mpitety dia mampiseho azy ireo koa. Tsy miombon-kevitra amin'ireo mpampianatra SEO raha toa ka manampy ny filahanao amin'ny teny lakile ampiasaina ny fametrahana an-dohateny. Na izany na tsy izany, heveriko fa fomba fanao tsara izany ary manampy pizazz kely rehefa misy olona misafosafo amin'ny rohy misy anao ary tendronina ny tendrony.
Ahoana ny amin'ireo rohy tohana?
Ity misy mailaka hafa azoko isan'andro. Tena mamaly an'ireto aho… manontany an'io olona io raha tena mangataka amiko izy ireo hametraka ny laziko, hahazo sazy avy amin'ny governemanta ary hiala amin'ny motera fikarohana. Fangatahana mampihomehy io. Ka indraindray, mamaly fotsiny aho ary milaza amin'izy ireo fa faly amin'izany aho… 18,942,324.13 $ XNUMX fotsiny ny vidiny isaky ny backlink. Mbola miandry olona hampifandray ilay vola aho.
Nahamarika aho fa nanoratra an'ity lahatsoratra mahavariana ity amin'ny [teny lakile]. Tianay ny mandoa anao hametraka rohy ao amin'ny lahatsoratranao mba hanondroana ny lahatsoratray [eto]. Ohatrinona no vidin'ilay rohy dofollow?
Tena mahasosotra izany satria mangataka ara-bakiteny ahy hanao zavatra vitsivitsy:
Manitsakitsaka ny fepetran'ny serivisy Google - mangataka ahy izy ireo mba hanafina ny rohy fandoavako karen'i Google:
Izay rohy natao hanodinkodinana PageRank na ny laharan'ny tranokala amin'ny valin'ny fikarohana Google dia azo raisina ho ampahany amin'ny tetikady fampifandraisana sy fanitsakitsahana an'i Google Webmaster Guidelines.
Schemes Google Link
Mandika ny lalàna federaly - mangataka amiko izy ireo hanitsakitsaka ny torolàlana FTC momba ny fanekena.
Raha misy fifandraisana misy eo amin'ny mpanohana sy ny mpivarotra izay tsy ampoizin'ny mpanjifa ary hisy fiantraikany amin'ny fomba fanombanan'ny mpanjifa ny fanekena izany dia tokony havoaka izany fifandraisana izany.
Torolàlana momba ny fanamafisana ny FTC
Manitsakitsaka ny fitokisan'ny mpamaky ahy - mangataka ahy izy ireo mba handainga amin'ny mpihaino ahy manokana! Mpihaino niasa nandritra ny 15 taona mba hananganana mpanaraka sy hananako fitokisana. Tsy azo heverina izany. Izany indrindra no antony ahitanao ahy hamoaka ny fifandraisana rehetra amin'ny lahatsoratra rehetra - na rohy mpiara-miasa izany na namana amin'ny orinasa.
Google dia nanontany fa ny rohy tohanan'ny dia mampiasa ny nofollow toetra Na izany aza, efa novain'izy ireo izany ary manana toetra tohanana vaovao ho an'ny rohy mandoa:
Mariho ny rohy izay dokam-barotra na fametrahana karama (matetika antsoina hoe rohy misy karama) miaraka amin'ny sandan'ny tohanana.
Ireto rohy ireto dia voarafitra toy izao:
Maninona no tsy manoratra hevitra fotsiny ireo mpibadika rohy?
Rehefa niresaka voalohany ny PageRank ary nifindra tao amin'ilay sehatra ireo bilaogy, dia fahita matetika ny fanehoan-kevitra. Tsy io ihany no toerana afovoan'ny fifanakalozan-kevitra (talohan'ny Facebook sy Twitter), nandalo ny laharam-pahamehana ihany koa ianao rehefa nameno ny antsipirian'ny mpanoratra anao ary nampiditra rohy tao amin'ny hevitrao. Teraka ny spam (ary mbola olana ankehitriny). Tsy ela akory dia nanangana rohy Nofollow ny rafi-pitantanana ny atiny sy ny rafitra fanehoan-kevitra.
Google dia nanomboka nanohana toetra hafa momba an'io, ugc. UGC dia fanafohezana ny atiny ateraky ny mpampiasa.
Azonao atao koa ny mampiasa fitambarana toetra. Ohatra amin'ny WordPress, ohatra, ny fanehoan-kevitra iray:
Ny ivelany dia toetra iray hafa izay andao ho fantatry ny mpikaroka fa ny rohy dia mankany ivelany toerana.
Tokony Hanao Lozam-pifamoivoizana Backlink ve ianao hahazoana rohy Dofollow bebe kokoa?
Ity dia teboka fifandirana lehibe amiko. Ireo mailaka spammy nomeko etsy ambony dia tena mahasosotra ary tsy zakako. Mpino mafy orina aho fa mila izany hahazoana rohy fa tsy mangataka azy ireo. Ny namako akaiky Tom Brodbeck dia nanonona tsara an'io anarana io linkearning. Mampifandray tranonkala sy lahatsoratra an'arivony avy amin'ny tranokalako aho… satria azon'izy ireo ilay rohy.
Izany dia nilaza fa tsy manana olana amin'ny fandraharahana manantona ahy aho ary manontany raha afaka manoratra lahatsoratra sarobidy amin'ny mpihaino ahy izy ireo. Ary, tsy fahita firy fa misy a dofollow rohy ao anatin'io lahatsoratra io. Laviko ireo lahatsoratra marobe satria ireo olona mandefa dia manome lahatsoratra mahatsiravina miaraka amina backlink miharihary ao. Fa mamoaka zavatra maro hafa aho izay lahatsoratra mahafinaritra ary ny rohy nampiasain'ny mpanoratra dia sarobidy amin'ireo mpamaky ahy.
Tsy manao asa fitoriana aho… ary manana rohy efa ho 110,000 izay mampifandray indray Martech Zone. Heveriko fa porofon'ny hatsaran'ny lahatsoratra avelako eto amin'ity tranonkala ity. Mandany ny fotoanao amin'ny famoahana atiny mahatalanjona… ary hanaraka ireo rohy miverina.
Tags: fanentanana backlinkfanovana rohybacklinksrohy fanehoan-kevitrafamborahanadofollowrohy dofollowkomisiona federalyftckonsole fikarohana googlefehezan-dalàna momba ny serivisy googleGoogle +fahazoana rohykalitaon'ny rohyrohy-tranonofollowrohy nofollowfilaharan'ny fikarohana organikarohy mandoarohy kalitaoRelrel dofollowrel nofollowrel sponsoredrel ugcmpikaroka fikarohanafilaharan'ny fikarohanarohy tohanaugcrohy ugcwordpress dofollowwordpress nofollow
21 Jan 2007 amin'ny 1:35 PM
Misaotra anao nanondro ny plugin Dofollow Doug. Fantatro fa nampiditra rel = ”nofollow” tamin'ny rohy anaty fanehoan-kevitra ny WordPress, ary tena miombon-kevitra amin'ny lojikanao aho fa raha mbola novolavolaina ny fanehoan-kevitra dia mendrika ny trosan'izy ireo ny rohy mifandraika rehetra tavela ao anaty ireo hevitra ireo.
22 Jan 2007 amin'ny 2:42 PM
Misaotra amin'ny tendrony; Vao nametraka ilay plug-in aho (fomba tsy fanaintainana tanteraka.)
Tao anaty tafatafa iray, nilaza ny spammer iray hoe:
“Handresy an'i Sam sy ny mitovy aminy ve ny fandraisana andraikitra ataon'ny Google, Yahoo ary MSN? “Heveriko fa tsy hisy akony firy izany amin'ny fotoana fohy, salantsalany na maharitra.”
Eto ny dinidinika feno:
22 Jan 2007 amin'ny 5:56 PM
Martin, lahatsoratra mahafinaritra. Manontany tena aho hoe ahoana ny fahasarotan'ny asany tamin'ny taona lasa!
24 Mey 2007 tamin'ny 6:22 hariva
Misy fomba ve hisafidianana izay rohy tiako avela harahina (aona, fananganana fiteny mahaliana nataoko)? Ny antony dia rehefa manondro tranokala crappy misy vaovao maloto ao aho dia aleoko tsy mampiroborobo azy io loatra. Tsy amin'ny sivana (raha miresaka aho, hoy, ny hevitra politika izay tsy mitovy amin'ny ahy fa raha miorina tsara sy voalamina tsara izy dia tsy manana olana amin'ny fampiroboroboana azy), fa kosa fomba iray hiadiana amin'ny entropy sy handavaka atiny maloto.
Tsy manana olana amin'ny fanovana rohy aho. Matetika aho manitsy ny hevitro mba hanampiana rohy ivelany Google Analytics, lohateny misy rohy ary manamboatra typografia ho an'ny mpitsidika, saingy tsara ve ny manamboatra azy io amin'ny lafiny sasany.
24 Mey 2007 tamin'ny 6:52 hariva
Azo antoka, theUg! Azonao atao ny manampy ny rel = ”nofollow” ao anaty rohy rehetra izay tsy tianao hanomezan'i Google laharana. ohatra:
24 Mey 2007 tamin'ny 7:22 hariva
Ya, mety ho mora kokoa noho ny manandrana mamafa azy ireo izany. Notehiriziko tao amin'ny Opera-Siko ireo singa be mpampiasa matetika toy izany (mora ampiasaina ny manana sombin-kazo, sombin-kaody ary sombin-kaody ao anaty tranokalanao mandritra ny fotoana rehetra), ka izany dia copie-paste fotsiny ho ahy.
28 Feb 2007 tamin'ny 12:55 maraina
Nahita an'io aho. Tokony hojerena alohan'ny hifandraisanao amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana.
Mar 26, 2007 amin'ny 5: 23 AM
Manaiky aho Doug. Raha sendra olana amin'ny famakiana sy ny fanamafisana ny hevitra tsirairay ianao (izay tokony hisy anao) dia misy dikany ny manome valisoa ireo tena valiny amin'ny rohy mety.
Hahazo fanehoan-kevitra “Lahatsoratra tsara” misimisy kokoa ianao vokatr'izany, fa ireo kosa dia miditra amin'ny fitoeram-bokatra ihany.
Ireo spammer miharihary dia manana anarana toa ny "manam-pahaizana SEO" na "Web design Atlanta" na zavatra iray teny napetraka. Ireo tena izy dia mazàna manana anarana tena izy toa an'i "Lisa" na "Robert".
Mar 26, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Mahafinaritra fa mijoro amin'ny olana tsy manaraka ianao. Misy hevitra momba izany ve? Nahazo ny valiny nokasainao ve ianao?
Mar 26, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Tsy ho zava-dehibe amiko ny valiny satria ho toa anao izy ireo! Ny fanehoan-kevitra amin'ny tranokalako dia tokony hanampy amin'ny laharana Google anao.
Apr 27, 2007 ao amin'ny 4: PM PM
Manana tranokala misy herinaratra Drupal aho, noho izany dia mametraka tsy misy rel = nofollow, ary mila mametraka plugin ianao hanampiana an'ity. Na dia eo aza ny fanaovana an'io fotoana fohy io, saingy tsapako fa ny antony tokana anaovako izany dia ny fahatsapana fa ny hevitra avelako amin'ny tranokalan'olona hafa dia tsy manome ahy laharam-pejy, izay omeko azy ireo ny laharam-pejy. Nanapa-kevitra ny handao azy io aho ankehitriny.
Ny ankamaroan'ny olona dia mampandefitra ny hevitr'izy ireo ka maninona no manasazy ireo izay mandany fotoana hamela fanehoan-kevitra mahasoa ao amin'ilay tranonkala?
Nanampy politikam-panehoan-kevitra tamin'ny tranokalako aho mba tsy hihevi-tena ho ratsy amin'ny famafana ireo hevitra ao amin'ny faritra volondavenona.
Ohatra, raha misy olona mamela hevitra milaza hoe "tranokala mahafinaritra", dia manolo-kevitra ny hamafa ilay hevitra aho, raha tsy avelany ho foana ny sahan'ny URL. Raha tsy nisy izany politika izany dia nahatsapa ho voatery nanamarina ilay rohy aho ary nanapa-kevitra mifototra amin'ilay tranonkala.
May 21, 2007 ao amin'ny 11: 38 PM
Misaotra ny vaovao, mahaliana ahy ihany.
ny olona sasany dia milaza fa ny pejy dia mbola hahazo index amin'ny alàlan'ny tag tsy manaraka. marina ve izany?
May 22, 2007 amin'ny 6: 33 AM
Eny, tsy ny motera fikarohana rehetra no manaja ny mpanaraka. Sendra izany i Google, satria izy no zazalahy lehibe eny an-tsena. Tsy azoko antoka ny momba ny Live, Ask na Yahoo! Mety haka fihadiana kely hahalalana.
Jun 20, 2007 ao amin'ny 5: 10 PM
Asa tsara - Tena manohitra ny nofollow aho.
Ny rohy rehetra dia tokony isaina, na tsy tokony avelanao hisy ilay rohy. Fantatro ny olona izay minia mampiditra nofollow amin'ny rohy ao anatin'ny lahatsoratr'izy ireo mba tsy hanana rohy ivelany iray taonina izy ireo, miaraka amin'ny teoria fa ireo tranonkala izay mampifandray bebe kokoa noho izy ireo dia mifandray dia mahazo PR ambany.
Manelingelina ahy tsy misy farany izany.
Hobo SEO Ekosy
Jun 23, 2007 ao amin'ny 2: 04 PM
Nanao toy izany koa izahay tao amin'ny bilaogim-baovao tsy misy afa-tsy valiny tsara momba ny fandraisana anjaran'ny mpampiasa sy ranom-pikarohana. 🙂
Jul 16, 2007 amin'ny 7: 34 AM
IMO rel = "nofollow" dia tena tsy misy ilana azy, tsy hampiato ny spam fanehoan-kevitra satria mampiasa rindrambaiko ny spam. Ny vahaolana tsara indrindra hanoherana ireo spamme commentaire dia ny plugins toa ny Akismet, Bad behaviour ary captchas na fanontanian'ny olombelona.
Jul 22, 2007 amin'ny 3: 01 AM
Eny? ireo wiki adala ireo?
manontany tena ianao hoe inona no hitranga raha samy mampiasa nofollow amin'izy ireo isika rehetra?
Jul 29, 2007 amin'ny 3: 30 AM
Salama, te hanontany aho raha mampiasa “nofollow” amin'ny lahatsoratra bilaogy ny WordPress, Yahoo 360, Blogger, sns. ie Raha manoratra lahatsoratra ao amin'ny bilaogiko aho ary mametraka rohy ao anatiny, miova ve ny rohy ao amin'ny lahatsoratro ho rel = nofollow?
6 Aogositra 2007 amin'ny 10:50 PM
Misaotra betsaka noho ny lahatsoratra tsara momba ilay toetra tsy manaraka. Satria napetraka ho default ao amin'ny WordPress izy dia mieritreritra aho fa be dia be ny olona tsy mahalala akory hoe eo izy.
Heveriko fa ny politikam-pamelana na tsy fanekena ny hevitr'olon-tokana fa tsy ny fanambaniana azy rehetra dia fomba tsara lavitra kokoa.
15 Aogositra 2007 amin'ny 3:00 PM
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity! Fantatro fa somary tara kely aho amin'ny fahitana azy, fa vao nanomboka nibilaogy aho ary manandrana mamantatra ny antony nametrahan'ny wordpress heck ao anaty rohiko. Hametraka dofollow aho noho ny fahitanao ny bilaoginao, angamba izany dia handrisika ny fanehoan-kevitra sy ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny bilaogiko vaovao.
Aug 16, 2007 amin'ny 10: 22 AM
Tsy azoko antoka hoe ohatrinona no manampy mivantana amin'ny fandraisana anjara. Heveriko anefa fa 'ny vorona misy volom-borona dia miara-manidina', noho izany dia mora kokoa ianao ny mifandray sy mandray anjara amin'ireo bilaogy hafa izay tsy mampiasa nofollow. Mandritra ny fotoana maharitra, heveriko fa misy tombony.
Tiako fotsiny izany satria mino aho fa ny ankamaroan'ny fahombiazako tamin'ny fitorahana bilaogy dia natao tamin'ny fandraisana anjaran'ny olona toa anao tamin'ny resaka. Fa maninona aho no tokony hahazo ny tombony rehetra ?!
26 Aogositra 2007 amin'ny 6:58 PM
Misaotra an'ity fampahalalana Doug ity, efa nanampy tanana tamin'ny fametahana rel ho an'ny rohy aho nefa tsy nandinika an'io fomba fiasa io mihitsy. Misy dikany ihany anefa, angamba hanomboka hanao an'io aho satria efa antonony tsara ny hevitro.
Sep 10, 2007 amin'ny 8: 48 AM
Salama, nametraka ilay plugin DoFollow aho andro vitsivitsy lasa izay, ary nahazo fisaorana vitsivitsy aho avy amin'ireo bilaogy kely nampifandraisiko tao amin'ny lahatsoratro sy ny hevitro.
Hetsika lehibe ihany koa, fa miaraka amin'ny fanehoan-kevitra / fitantanana mpampiasa henjana fotsiny, raha tsy izany dia ho lasa loharano spam haingana kokoa noho ny eritreretintsika ny bilaogy.
Dec 13, 2007 ao amin'ny 8: PM PM
na izany aza, ity nofollow ity dia tena nampijaly ny mpamaham-bolongana sy ny mpitsikera ara-dalàna… irariana fotsiny aho raha misy afaka mamorona plugin iray hahafahan'ny / hanafoana ny nofollow amin'ny sitrapon'ny admin. ny plugins nofollo rehetra nampiasako dia manala ny tag nofollow amin'ny hevitra sy / na mpitsikera rehetra. toa ny nolazainao, misy ny olona misafidy ny hanaiky ny hevitr'ireo mpampiasa azy
Dec 14, 2007 amin'ny 3: 15 AM
Manaiky aho, Jessie! Nahazo izany valiny izany tamin'ny feo avo sy mazava ny WordPress, saingy mieritreritra aho fa mety iharan'ny tsindry avy amin'ny Search Engine izy ireo mba tsy hanao an'io safidy io.
Dec 14, 2007 amin'ny 5: 52 AM
ny zavatra mampihomehy dia ny ankamaroan'ireo izay "mpisolo vava" nofollow dia manana ny toetrany nofollow ao amin'ny tranokalany / bilaogin'izy ireo…. tsy mampihomehy ve ny filazan'ny olona zavatra hafa? nankafy anao ny fananako dofollow eto toy ny ao amin'ny bilaogiko… tsy azoko antoka hoe inona no ho fiantraikan'izany amin'ny PR ao amin'ny google.
3 Feb 2008 tamin'ny 3:42 maraina
Misaotra anao nanazava izany. Vao manomboka tranokala aho izao ary mijery ny safidin'ny bilaogy rehetra. Mampalahelo fa maimbo amin'ny ranomandry ny rindrambaiko bilaogy am-bifotsy azoko ampiasaina amin'ny tranokalako, ary nieritreritra ny hampiasa wordpress aho, noho izany dia misaotra anao miresaka momba ny olana manaraka na tsy manaraka. Manana tranokala 2 aho, ny iray tsy misy rohy miverina google, ary ny iray andro ny tranokalako faharoa dia nampiseho 10 google backlinks avy amin'ny manga, ary tena faly aho! Mametraka amin'ny bilaogy foana aho ary tsy fantatro akory fa afaka mahazo rohy amin'izany ianao, (duh, newbie!) Ary tampoka teo dia nanana rohy 10 avy any Dawud Miracle aho - iza no izy ???? Narahiko ilay rohy niverina tany amin'ny tranokalany ary tsapako fa iray amin'ireo bilaogy marobe marobe narotsako io, misaotra an'i Miracle, fahagagana io !!! Dia nanontany tena aho hoe ahoana no nitrangan'izany, ary maninona no tsy nisy izany teo aloha! Ka azoko izao. Rehefa mahazo ny rindrambaiko bilaogiko aho dia hanana ny fanarahana azy fa tsy ilay tsy manaraka. Ampy izay ny fahombiazana ho antsika rehetra… ..